Dancing in Dafar | venuscurves
Dancing in Dafar
ယာဖောမြို့ ဟာ အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ ရှေးဟောင်းဆိပ်ကမ်းမြို့ တစ်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်။တဲလ်အဗစ်မြို့ ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်ပြီး ခရစ်ယာန် သမ္မာကျမ်းစာထဲက ဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီး၊ယောနနဲ့ စိန့် ပီတာ စတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ဆက်နွယ်နေ တဲ့အတွက် နာမည်ကျော်ပါတယ်။ ဂျက်ဖာဒေသဟာအစ္စရေးပါလက်စတိုင်း လူမျိုးတွေ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် မုန်းတီးမှုတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇတ်လမ်းထဲက ဘဲလေးကျချေသည်ပီယာရဲ့ ဘ၀အိမ်မက်က
သူ့ မွေးဖွားရာဇာတိယာဖောမြို့ မှာ အကသင်တန်းပြန်ဖွင့်ဖို့ ပါ။
သင်တန်းကာလ ၁၀ပတ်မှာ၁၁နှစ်အရွယ် ပါလက်စတိုင်း၊အစ္စရေး၊ဂျူးအစ္စရေး ကလေးငယ်တွေကို အတူတွဲပြီးကဖို့ သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။အကသင်တန်းဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ လူမျိုးရေးကွဲပြားမှုကြောင့် ပဋိပက္ခဖြစ်နေကြတဲ့ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းဒေသအသေးစားလေးဖြစ်လာပါတယ်။
သူတို့ ရဲ့ ရန်သူတွေနဲ့ အတူအကသင်နေကြရင်းကလေးတွေဟာမတူကွဲပြားမှု၊လူမျိုး၊ဇတ်၊ စတဲ့ စိတ်ထဲကအစွဲအလန်းတွေကိုတွန်းလှန်ကြရတဲ့အကြောင်းရောမွှေတင်ပြထားပါတယ်။
ပီယာကသူတို့ ဟာဘာသာရေးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပဲတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပုဂ္ဂလိကတဦးစီအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ လိုကြောင်း၊တယောက်ကိုတစ်ယောက်လေးစားဖို့ ၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားဖို့ လိုကြောင်းသင်ကြားပေးခဲ့တယ်။
ပီယာက ကလေးတွေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ရင် အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ကလေးတွေကို အတူကဖို့ ၊တစ် ယောက်ကိုတစ်ယောက်ယုံကြည်ဖို့ သင်ကြားပေးရင်း အကနဲ့ ရွေ့ လျားမှုအနုပညာဟာ နိုင်ငံရေး၊လူမျိုး ရေးနယ်နမိတ်ကိုကျော်လွန်အောင်နိုင် သွားတဲ့အကြောင်းရိုက်ကူးတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Renownedထင်ရှားသော ballroom dancer Pierre Dulain stars in this charming documentary that offersaunique perspective on the Israeli-Palestinian conflict. Three diverse Jaffa-based schools host Dulain's Dancing Classrooms program. Ballroom basics are taught to an ethnically mixed group of children, the most passionate members of which are trained foracitywide competition. What results isasweet and incredibly moving tale filled with moments of truth, poignancy and hope.
is the southern, oldest part of Tel Aviv-Jaffa (since 1950), an ancient port city in Israel. Jaffa is famous for its association with the biblical stories of Solomon, Jonah, and Saint Peter.
ယာဖောမြို့ ဟာ အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ ရှေးဟောင်းဆိပ်ကမ်းမြို့ တစ်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်ယာန် သမ္မာကျမ်းစာထဲက ဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီး၊ယောနနဲ့ စိန့် ပီတာ စတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ဆက်နွယ်နေ တဲ့အတွက် နာမည်ကျော်ပါတယ်။ ဒီဇတ်လမ်းထဲက ဘဲလေးအက ပီယာဟာ သူ့ ရဲ့ မွေးရပ်ဇာတိ ယာဖောမြို့ က အစ္စ ရေးပါလက်စတိုင်းပဋိပက္ခကို
ယာဖောမြို့ မှာ ကလေးငယ်တွေကိုအတူ
နိုင်ငံတကာမှာထင်ရှားတဲ့ ဘဲလေးကချေသည် ပီယာရဲ့ ဘ၀အိပ်မက်က သူ့ မွေးဖွားရာဇာတိယာဖောမြို့ အကသင်တန်းပြန်ဖွင့်ဖို့ ပါ။
၁၀ပတ်မှာ၁၁နှစ်အရွယ် ပါလက်စတိုင်း၊အစ္စရေး၊ဂျူးအစ္စရေး ကလေးငယ်တွေကို အတူတွဲပြီးကဖို့ သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇတ်လမ်းထဲမှာ သူတို့ ရဲ့ ရန်သူတွေနဲ့ အတူအကသင်နေကြရင်း
ကလေးတွေရဲ့ မတူကွဲပြားမှု၊လူမျိုး၊ဇတ်၊ စတဲ့ စိတ်ထဲကအစွဲအလန်းတွေကိုတွန်းလှန်ကြရတဲ့အကြောင်းရောမွှေတင်ပြထားပါတယ်။
အကသင်တန်းဟာ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းဒေသရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ လူမျိုးရေးကွဲပြားမှုကြောင့် ပဋိပက္ခဖြစ်နေကြတဲ့ ဒေသရဲ့အသေးစားလေးဖြစ်လာပါတယ်။ ပီယာက ကလေးတွေကို အတူကဖို့ ၊တစ် ယောက်ကိုတစ်ယောက်ယုံကြည်ဖို့ သင်ကြားပေးရင်း အကနဲ့ ရွေ့ လျားမှုအနုပညာဟာ နိုင်ငံရေး၊လူမျိုး ရေးနယ်နမိတ်ကိုကျော်လွန်အောင်နိုင် သွားတဲ့အကြောင်းရိုက်ကူးတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျက်ဖာဒေသမှာ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် မုန်းတီးမှုတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာမှာကျော်ကြားတဲ့ဘဲလေးအကပညာရှင်ပီယာရဲ့ ဘ၀အိမ်မက်က သူ
သူတို့ ဟာဘာသာရေးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပဲ ပုဂ္ဂလိကတဦးစီအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ လိုကြောင်းသင်ကြားခဲ့ရတယ်။တယောက်ကိုတစ်ယောက်လေးစားဖို့ ၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားဖို့ ၊
ပီယာက ကလေးတွေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ရင် အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။